Imizuzu emi-5 yokuthemba ibhlog kaMatías Neiff -Geofumadas
Imizuzu emi-5 yokuthemba ibhlog kaMatías Neiff
NgoJuni, 2011 Ukufundisa i-CAD / GIS, Geospatial - GIS, Internet kunye neBlogs, Ukuprinta kokuqala
I-GIS, i-scripting kunye ne-Mac yintlangano yendalo kwi bhulogi ukuba ndithe ndagqiba ekubeni ndinconywe, kuba kum ngokwam uye wandinika ukwaneliseka okuninzi ukufumana.
Ukufunda izizathu zokuba le bhlog ifike apho kusenza siqonde ukuba kutheni ishiywe kunye nethemplethi yakudala yeWordPress, ngaphandle kweqhosha lasekhaya kunye ne-url engenabubele kuMnu Google. Kwaye kukuba umxholo wayo awusekelwanga kwisantya esikhawulezileyo sokubakho kwi-blogosphere kodwa njengesenzo sokubulela ngento esiyifundileyo mihla le ngesithembiso esithi phantse yonke into:
le ngcamango ayisoze yenza kwakhona zezinto sele zikhona ukuba awuyi kudala umxholo omtsha ukunceda uluntu lwe-intanethi njengengqondo ehlangeneyo.
Ukubonisa ukuba imizuzu emi-5 yokuthenjwa kufanelekile akukho nzima ukuyifeza. Kuya kufuneka ndikubonise ilifu lethegi ukuze ubone ukuba ngumxholo we-GIS kumbono wenkqubo, ngeengcebiso ezininzi ezisebenzayo kunye nekhowudi kwiindawo ekungasetyenziswa kuzo ukubandezeleka:
Ngelixa lineminyaka embalwa ubudala, ayinayo into eninzi. Kodwa into ekhoyo iyazithetha.
Ndiyishiya ezinye izihloko ukuya apho, tweet kwaye uzifake kwiibhukumaka zakho.
I-Geonetwork kwi-Debian plesk
Yongeza i-900913 ukucacisa
Fihla iMapserver .map usebenzisa i-wrapper
Iingxaki nge-bar yokumisa nge-widget nge-pmapper 4
Iskripthi sokungenisa imilo emininzi kwi-PostGIS
Indlela yokuqokelela iMaphuserserver
Yongeza inkxaso ye-Postgis kwi-database
Yeka i-CD okanye i-DVD eqinile kwi-Macbook
Index pdf kunye neefayile zegama kwi-MySQL
Yiya kubhulogi kaMatías Neiff
Khangela inkampani kaMatías Neiff
Post edlulileyo«Ngaphambilini Ungasusa njani ii-comas kunye nee-hyperlink ukusuka kumanani kwi-Excel
Post Next Iividiyo ezingaphezulu ze-Civil 3D, i-AutoCAD Imephu kunye neNkundlaOkulandelayo »